စစ်မှန်သောသတင်းကွန်ယက်သည်အဝေးမှ Inter ည့်သည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများအတွက် NewTek TalkShow ကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါရီးရဲလ်သတင်းကွန်ယက်အဝေးမှဧည့်အင်တာဗျူးများသည် NewTek TalkShow အသုံးပြု
San Antonio, TX - နိုဝင်ဘာလ 30, 2015 - အဆိုပါရီးရဲလ်သတင်းကန်ြယက် (TRNN), Baltimore အတွက်အွန်လိုင်းမှသတင်းကွန်ရက်မကြာသေးမီကတပ်ဖြန့် TalkShow ™ မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုသည့်စနစ် NewTek™ အရည်အသွေးမြင့်မားဝေးလံသောဧည့်သည်အင်တာဗျူးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ Live Show မြှင့်တင်ရန်။
doesn တစ်လုံးဝအလှူရှင်-ရန်ပုံငွေသတင်းဘူတာရုံအဖြစ်''t ကိုမဆိုအစိုးရသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ကြော်ငြာဒေါ်လာကိုလက်မခံ, TRNN အကြီးအကျယ်ယင်း၏မစ်ရှင်အောင်မြင်ရန်နည်းပညာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကွန်ယက်တစ်နေ့လျှင်လေးငါးခုမှပြပွဲထုတ်လုပ်ရန်ကြီးပြင်းသကဲ့သို့, အဖွဲ့ကကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့် Skype ကို၏အခြေခံဗားရှင်းကို အသုံးပြု. စတင်ပေမယ့်အလျင်အမြန်ယင်း၏ချို့ယွင်းချက်ကိုမြင်တော်မူ၏။
TriCaster သုံးပြီးအောင်မြင်မှုတှေ့™ စတူဒီယိုထဲမှာ 8000 နှင့် 450 Multi-ကင်မရာကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ, သူတို့ခငျြးခငျြးလှညျ့ NewTek ကုန်ပစ္စည်း - TalkShow VS-100 ။ TalkShow ချောမွေ့စွာမဆိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုသို့ပေါင်းစည်းဖို့ 300 သန်းလစဉ်-connected Skype ကိုအသုံးပြုသူများကမဆိုဖွကြောင်းဗီဒီယိုတောင်းဆိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
"လူတွေကတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာလုံးဝဘက်မလိုက်နှင့်ရပ်ရွာ-oriented ဖြစ်ပါတယ်" ဟုခရစ် DeMillo, TRNN မှာစတူဒီယိုမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့က TRNN မှာကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေလုပ်နေ, နှင့် NewTek TalkShow ထိုသို့ပြုမှကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ "
TRNN ရဲ့အသစ်ကိရိယာများ preshow ချိန်ညှိအားဖွင့်ဖြင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပို်စေသည်အဖြစ်အများစုကအင်တာဗျူးများ, Post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အများကြီးအလုပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ Videos ကိုအလွယ်တကူ Baltimore ဒေသအတွင်းဝယ်လိုအားတွင် Roku, အ TRNN က်ဘ်ဆိုက်, YouTube ပေါ်မှာ posted နှင့်, Comcast နေကြသည်။
ယင်း၏အဆင့်မြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ TRNN ယင်း၏ကြည့်ရှုဖို့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာယူလာရန်ကျူးလွန်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလွတ်လပ်သောသတင်းကွန်ရက်ကရှုမြင်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပိုပြီးများအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး NewTek ဤနေရာတွင်ဘလော့ဂ်: bit.ly/1FPRpZb.
အဆိုပါရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် IP ကိုဗီဒီယို: NewTek အထူး webcasts ကြေညာ - နိုဝင်ဘာလ 8, 2016
NewTek NDI ™ကင်မရာအိုင်ပီဗီဒီယိုသတင်းရပ်ကွက်များထဲသို့မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ပြောင်းလဲ - အောက်တိုဘာလ 31, 2016
TwitchCon 2016 မှာ NewTek အိုင်ပီစီးရီးစျေး - အောက်တိုဘာလ 18, 2016
Baltimore Comcast NewTek ခုနှစ် TalkShow အဆိုပါရီးရဲလ်သတင်းကန်ြယက် TriCaster TriCaster 450 TriCaster 8000 TRNN လုပ်ငန်းအသွားအလာ YouTube ကို 2015-11-30
ယခင်: Garrett ဘရောင်းကသူ့ရွှေ့ Image ကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူတို့နှင့်အတူအတွက် pack မှာနှင့် M-1 မက်စ်နှင့်အတူတက်နှင့်တွေ့ဆုံ
နောက်တစ်ခု: trilogy ပာအရောင်းရောက်ရှိခြင်းတိုးချဲ့